FOMBA HAMAFANA FANEHOAN-KEVITRA AO AMIN'NY INSTAGRAM - INSTAGRAM - 2019
Fomba hamafana ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny Instagram
Ny programa Clown Fish dia manasarotra ny manova ny feonao amin'ny Skype. Izy no noforonina manokana hiara-miasa amin'io mpanjifa io mba hifandraisana. Ho ampy ho anao ny manomboka Clownfish, manomboha Skype, mifidiana ny feo tianao ary miantso anao - dia ho hafa tanteraka ianao.
Andeha hojerentsika akaiky ny fomba hanovana ny feonao ao amin'ny mikrô, amin'ny fampiasana ny Clownfish. Voalohany dia mila mandefa ilay programa ianao.
Raiso ny programa amin'ny tranonkala ofisialy ary hazavao ny rakitra fananganana. Tsindrio ny bokotra manaraka, farito hoe aiza no hapetraka. Ny fampiharana dia tokony hametraka ao anatin'ny segondra vitsy. Aorian'izany dia afaka manomboka miasa miaraka amin'ny feo ianao.
Afeno ny fampiharana.
Ahoana ny fomba hanovana ny feo amin'ny Skype mampiasa Clownfish
Aorian'ny fanombohana ny fampiharana icon dia tokony hiseho ao amin'ny fitoerany (eo ambany faran'ny faritra farany ambany amin'ny birao Windows).
Manomboha Skype. Tokony hangataka fahazoan-dàlana hamela ny fifandraisana eo amin'ny programa. Ekeo izany amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra mety. Ankehitriny misy fifandraisana eo amin'ny Clown Fish sy Skype. Mbola mijanona fotsiny ny manova ny feo fanovana.
Tsindrio eo amin'ny tsanganana Clownfish ny sarin'ny Clownfish. Mizara ny sakafo main menu. Mifidiana "Feo fiovàna", avy eo "Voices". Fanteno ny fanampim-pandaharana azo avy amin'ny lisitra. Raha afaka miova izany mandritra ny antso izany.
Raha te hihaino ny feonao, dia fidio ny singa ao amin'ny Clownfish: Miova feo - Mihainoa ny tenanao. Ny safidy ity zavatra ity indray dia hanala ny fihainoana ny tenanao.
Anio dia miantso ny olona tianao hiantso, na miantso ny fitsapana ny fanandramana Skype.
Ny feonao dia tokony ho hafa. Azonao atao ny manitsy ny tara-pahazavana. Raha manao izany, dia fidio ny singa menamena: Change Voices - Feo - Fehezanteny (Manual) ary ampiasao ny tsindry mba hametrahana ny dingam-paniry.
Ny programa dia manana fiantraikany feo. Raha hampiasa azy ireo dia misafidy ity menu menu manaraka ity: Change Voice - Effect Sound and click on the desired effect.
Jereo koa: Programa hanovana ny feo ao amin'ny mikrô
Manararaotra ireo namanao amin'ny fanovana ny feonao amin'ny Clownfish. Na afaka manitsy ny feonao fotsiny ianao. Afaka maimaim-poana ilay fandaharana, ka azonao ampiasaina araka izay tianao.